Home News 144-Milyan oo ku maqan xafiiska R/wasaare Kheeyre Iyo Gudoomiye Mursal oo Toosh...
144-Milyan oo ku maqan xafiiska R/wasaare Kheeyre Iyo Gudoomiye Mursal oo Toosh ku Ifiyay!!
Xildhibanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka u gudbiyay dacwo ah iney la’yahay halka ay ku baxday lacag dhan 440-kun oo dollar oo bil walba mid boqol looga jari jiray.
Xildhibanaada qaarkood oo arrintaan ka hadlay ayaa sheegay in lacagtaasi ku tuhmayaan Guddoonka Golaha Shacabka oo markaasi uu horkacayay Guddoomiyihii is casilay ee Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari.
Guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan ayaa sheegay inuu baarist ku sameynayo lacagtan halka ay ku baxday iyo cida ay ku maqan tahay.
Waxa uu sheegay in uusan aqbali doonin in gudaha golaha uu ka dhaco isdaba marin iyo musuq maasuq soona cadeyn doono lacagaha maqan halka lagu bixiyay.
Xildhibaanada ayaa guddoonka ka dalbaday in la soo cadeeyo halka ay ku baxeen lacagaasi iyo sida loo maamulay.